काठमाडाै । डा.गाेविन्द केसीलार्इ सर्वाेच्चले मानहानीकाे अारेापमा पक्राउ गरेपछि माअाेवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले सर्वेाच्चलार्इ भगवान नभएकाे भन्दै टिप्पणी गरेका छन ।
विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ता, विद्यार्थीले केसीकाे रिहाइ माग गर्दै प्रर्दशन गरीरहेका बेला श्रेष्ठले ट्वीट गर्दै कानुनले ज्यादती गरेकाे बताएका हुन । उनले ट्वीटमा डा•गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानुनको नाममा गरिएको ज्यादति हो।”अदालतको मानहानि”लाई सत्याग्रही बिरुद्ध हतियार बनाईनु नितान्त गलत छ।फेरि दोहोर्याएर भन्छु,अदालत”भगवान”होइन। राज्यको पुनसंरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो। त्यसको पनि याे परिणाम भएकाले सम्बन्धित सबैलार्इ बुझ्न अाग्रह गरेका छन ।
चिकित्सा शास्त्रकाे विषयलार्इ लिएर चाैधाै पटक अनशन बसेका केसीलार्इ साेमबार पक्राउ गरीएकाे थियाे । उनकाे रिहार्इकाे माग गर्दै र सर्वाेच्चकाे विराेधमा माइतीघरमा प्रर्दशन भइरहेकाे छ ।
डा•गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी कानुनको नाममा गरिएको ज्यादति हो।"अदालतको मानहानि"लाई सत्याग्रही बिरुद्ध हतियार बनाईनु नितान्त गलत छ।फेरि दोहोर्याएर भन्छु,अदालत"भगवान"होइन। राज्यको पुनसंरचना गर्दा न्यायालयलाई भने यथावत राखियो।त्यसको पनि परिणाम हो यो।सम्बन्धित सबैले बुझुन् ।
— NKShresthaPrakash (@nksthaprakash) January 9, 2018
प्रकाशित : मङ्गलबार, पुष २५, २०७४१३:५२
सर्वाेच्चमा डा.केसीको बयान सुरु
टाउकोको कंकाल, एउटा खुट्टाको हड्डी आदि फेला,अनुसन्धान गर्दा खोलामा धकेलेर हत्या गरेको खुलाशा!!
बटुक भैरब मन्दिरमा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह, समर्थकहरुको भिड
हराउँदै गए गाईने दाइका पिडा, बेदना र विरह बोल्ने गीत
जलेर घर नष्ट,स्थानीयको सक्रियतामा आयो नियन्त्रणमा!!
रक्षाबन्धनको भोलिपल्ट मङ्गलले आफ्नो चाल परिवर्तन गर्ने, यी ५ राशिका चम्किनेछ भाग्य